トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin haagoni kuroora muSeoul, uyewo kufamba yoga upenyu
The ukama pakati mapatya mweya ndiwo mugumo chaiye mumwe bato kukwezva nzira
kuti [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti vafemberi hadzishandi chete hazvo inobatana ino.
Zvechokwadi, nokuti musoro kundosangana zvinoshamisa munyika ino, zvakare pakupedzisira ashanyirwe kwekanguva, zviri zvakare zvinowanzoita kuti muchato. Asi hachisi chimwe zvakatemwa, kuwedzera yavo kune mumwe nomumwe, ndiko shanyira zvekare pa nguva kukura mweya.
Zvisinei, vaviri vanhu hakuna kukwana yokubatanidza kuburikidza kuparadzana, zvichaita kuuyawo nyaya kufamba upenyu zvakasiyana. Izvi, mudzivisi hakurevi kwete mapatya mweya, asi tinofanira kufunga uye havana kundosangana pezvokuvamba kuti chokuita munyika ino. Uyezve, kuti mapatya mweya zvechokwadi chete, anofanira kukurira wandei mutsekwende. Kana iwe usingagoni kubvisa izvozvo, wasvika yakasimba kuparadzana pasina Soitogeru upenyu kuroorana. In
mapatya Seoul kwete yakanakisisa kuti ungasungwa nei
? 2 vanhu havana rakasungirwa asingagoni, rinova yakasungirirwa sezvo ndakasangana kuti dzikurukure mweya nyaya, 2 vanhu ungasungwa ichakurukurwa kuitwa sezvo mutongo Mwari uye kwete yakanakisisa. Not kutarisirwa kuvandudza mumwe nokuva pamwe chete, kana iwe usingagoni vanange mufaro chaiwo, mugumo zvaizoita kubvarura mapatya mweya.
? muna kuti vave uye vari
mapatya Seoul uye mumwe zvakare kutsvaga mumwe webato, kurasa vaingozvifunga pfungwa uye pfungwa mumatanho wandei, zvichaita vanofanira kupa Unconditional. Naizvozvo, unogona kuvimba rimwe bato kunyange kana zvikuru mumwe vade mumwe zvakasimba, zvakadai kana tariro kuvakwa panzvimbo hazvikwani yavo, vanhu vaviri uye vari kutsvaka shamwari udyire vachamanikidzwa wakafamba nenzira yakasiyana . Chikamu kuti handidi kuona
mapatya Seoul akakutsaurai pakutanga mumwe mweya kuti okusava Kutarira, inoti iri pamberi, akadai pane nohwake mune mumwe wavo. Nokuda kwechikonzero ichi, unogona kuona dzimwe nguva pachangu kuti ndakanga ndisingadi kuona rimwe bato. Uyezve, sezvo kazhinji ndechokuti ane pakatarisana chikamu, kuvapowo nyaya kuti kutungamirira okusava havachafaniri kutsungirira kuona kuti chikamu.
Wangova kusangana Kuparadzana pasina mutobvu kuti kuroorana nevanhu sokuti mumwe
kana mapatya Seoul funga uye kwaiva muedzo kuti dzikurukure mweya, iwe acharavira marwadzo, dzakadai nguva yakabvaruka mweya. Kuwedzera dzikurukure mweya nokuti ari basa rokupupura dambudziko pamusoro anokwenya uye ino kuti akanga akatakura muupenyu hwekare, zvingava kuchirwadza.
nepfungwa dzakadaro, zvose ndiyo nhamo kune nenzira isingaoneki achitovabatsira kunatsiridza mweya. Izvi pashure dzichidzidzisa nhamo ndechokuti, vachaparidza kuti muri kunyange kana mweya pedyo mukuru-dimensional sezvo paiva kuparadzana mapatya mweya, kukura kurei kuti munhu.